प्रधानमन्त्रीको उखानटुक्काले मात्र देश समृद्धि हुदैन :जगदिश्वर नरसिंह केसी
प्रकाशित मिति: 2016/05/20
जेठ ७, काठमाण्डौ । सरकारले यही जेठ १५ गते आगामि आर्थिक बर्षको बजेट संसदमा प्रश्तुत गर्दैछ । यसअघि सरकार परिवर्तनको तिब्र बहश चलिरहँदा अन्त्यमा रोकिएको स्थीतीमा बजेटपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका बहशहरु पनि यदाकदा चलिरहेकै छ ।
बिशेषतः यसअघि सरकार परिवर्तनमा कांग्रेसको भुमिकालाई लिएर बिभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहँदा, सरकारको बर्तमान कामकारबाही, र भुकम्पपिडितका लागि भैरहेको राहत बितरणको स्थीती तथा सरकारको निति तथा कार्यक्रमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्टि देखीदै आएको छ । यही बिषयमा नेपाली कांग्रेस भित्रको धारणा बुझ्ने कोशिस गरेका छौ । प्रश्तुत छ, नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसी सँग गन्तब्य नेपालका शंकर गौलीले गरेको अन्र्तबार्ताको संम्पादित अंश ।
१. सरकार फेर्ने काममा कांग्रेसले यसअघि बेमौसमको बाजा बजायो, अन्त्यमा चिप्लीयो भनियो । यो कस्तो चिप्लाई हो ?
सरकार फेर्ने कार्य कांग्रेसको अग्रसरतामा अघि बढेको थिएन । सरकारमै सामेल दोस्रो ठुलो पार्टि एकिकृत नेकपा माओबादि(हालको नेकपा माओबादी केन्द्र)ले सरकारको कार्यशैली सन्तोसजनक भएन, भुकम्पपिडितहरुले राहत पाउने स्थीती भएन, लौ हामी सरकारबाट बाहिरीन्छौ हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो भनेको स्थीतीमा जनताको मुद्धा सम्बोधन हुने अर्थमा सरकार परिवर्तन माओवादीकै नेतृत्वमा बनाउन तयार भएको स्थिीती हो । यद्यपी यही बेला सरकारकै नेतृत्वकर्ता दल एमालेसँग ९ बुँदे सहमति सँगै पुनः बर्तमान सरकार नै उपयुक्त भन्दै प्रचण्डजी उहाँहरुसँग मिल्न जानुभयो । यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन । यद्यपी सरकारबाट किन बाहिरीन खोज्नुभो र फेरी बर्तमान सरकार नै उपयुक्त भन्दै बस्नुभो यो थाहा हुन सकेन । मैले भन्नु यतिमात्र हो, सरकार नढाली हुँदैन भनेर कांग्रेस लागेको होइन र लाग्दैन पनि ।
२. सरकार सञ्चालनकै लागि एमाले र माओबादी बिच ९ बुँदे सहमति भयो, यसलाई चै कसरी लिनुभएको छ ?
हेर्नुस, सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि यस्ता सहमति हरु हुने गर्दछन । स्वभाविक हो । यद्यपी यहाँ सोचनिय बिषय के छ भने सरकार सञ्चालन हुँदै गर्दा आफै अविश्वासको प्रश्ताब ल्याउने र फेरी रातारात सहमतिको नाममा ९ बुँदे सहमति गर्ने जुन काम भयो यो आफैमा अपबित्र गठबन्धन हो । अपबित्र गठबन्धन यस अर्थमा यहाँ धेरै चलखेल पनि भए, के के गरे उनीहरुले नै सोचुन ।
३. यहाँले एमाले–एमाओबादि (बर्तमान माओबादि केन्द्र) ९ बुँदे सहमतिलाई अपवित्र भन्नुभयो, यसमा त्यस्तो के छ, जसकारण अपबित्र भन्दै हुनुहुन्छ ?
हेर्नुस, अघिल्लो दिनसम्म सरकारमा बस्ने दोस्रो नेताले नै सरकारले केही काम गरेन भनेर पटकपटक बोल्नुभयो । मिडियाहरुलाई बोलाएर पार्टिको आन्तरीक बैठकको निर्णय भन्दै प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बन्ने भएँ भनेर बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाउन पुग्नुभएको त यहाँले देख्नुभएकै होला । यति सबै घटनाक्रम अगाडि बढिसकेपछि अन्त्यमा रातारात फलानो फलानो बुँदे सहमती भन्दै जुन रुपमा ९ बुँदेको कुरा गरिएको छ, यसलाई अपबित्र नभनेर के भनौ ।
४. जेठ १५ पछि बर्तमान नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका कुरा पनि आएका छन, यसमा कांग्रेसको बुझाई के छ ?
जेठ १५ पछाडि को प्रधानमन्त्री बन्ने वा नबन्ने त्यो कांग्रेसको लागि सरोकारको बिषय होइन । जहाँसम्म प्रचण्डको कुरा छ , यसअघि सरकारको कामकारबाही प्रति असन्तोस बढिरहेको स्थीतीमा सहयोग गर्नु पर्यो भन्दा कांग्रेसले साथ दिन खोजेको मात्रै हो । पहिले कांग्रेसले साथ दिने स्थिीतीमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने निष्चित भएपनि अवको स्थिीती त्यस्तो देखिदैन । बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिउन्जेल सरकार परिवर्तन नहुने भएकाले त्यसपछि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हुदैन ।
५. प्रचण्डले फेरी लौ सरकारको नेतृत्वका लागि आफुलाई सहयोग गर्नुपर्यो भनेर प्रश्ताब गरेको स्थिीतीमा यहाँहरु के गर्नुहुन्छ ?
हेर्नुुस प्रचण्ड विपक्षी दलकै भएपनि एउटा सबैले मानेको नेता हो । ब्यक्तिगत रुपमा म उहाँलाई सम्मान नै गर्छु । तर जहाँसम्म उहाँको शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्म आउँदा बोलीमा उहाँको जुन किसिमको दम छ, त्यो ब्यवहारमा पटक्कै देखिदैन । उहाँले बोल्दा त ठुलाठुला कुरा भैहाल्यो जसरी गर्नुहुन्छ, तर जब निर्णयको समय आउँछ, १ हप्ता होइन । बिहानको बेलुका या केही छिनमै कुरा फेरिने उहाँको प्रवृति आफैमा बिरोधाभाषपुर्ण छ । त्यस अर्थमा सरकार परिवर्तनको बहश यसअघि तातिएको भएपनि अहिले बन्द भैसकेकाले यसबारे कांग्रेसले तत्कालै केही सोचेको छैन ।
६. अव सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रममा जाउँ, कांग्रेसले निति तथा कार्यक्रमलाई चै कसरी लिएको छ ?
हेर्नुस, निति तथा कार्यक्रमलाई बिरोध गर्नकै लागि काग्रेसले बिरोध गर्यो भनेर सोच्नु गलत हो । अहिलेको निति तथा कार्यक्रम मुखमा चकलेट हालिञ्जेल गुलियो आएजस्तै, सुनिन्जेल बहुतै आनन्द आउने छ । यसमा दुईमत छैन । तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा केहो भने यसको कार्यन्वयन पक्ष कति सबल र बास्तबिक छन यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने भुकम्प गएको बर्षदिन बितिसकेर अर्को बर्ष कटिसक्दा पनि पिडितहरु अझै हिउँद बर्खा खुला आकासमुनि बिताउन बाध्य छन, प्राथमिक राहतको स्थिीती सबै ठाँउमा अझै पुगिसकेको छैन । तर सरकार के भन्दैछ भने सामुहिक जमानीमा ३ लाख घर बनाउन ऋण दिने, जबकी बैकहरुले नै यो कुरा अस्विकार गर्दै २० खर्व भन्दा बढि सरकारले बजेटमै ब्यवस्था गरेमात्र यो स्थिीती सम्भव हुने बताउन थालेका छन । सबैले देखेकै छ, त्यो स्थिीती आजको सरकार सँग छ ? । अर्कोतर्फ शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर पैसा बाँड्ने कुरा, १० बर्षमा १० हजार मेगावट बिजुली र हावाबाट बिजुलीको जतिपनि कुरा गरिएको छ, त्यो हावामै बिलय हुने कुरा नभएर के हुन त । अझै हिजोआज त सुन्दै छु कि पानि जहाज र ग्याँस पाइपका कुरा यो आफैमा सामाजिक सञ्जालमा भैरहेका टिप्पणीबाटै प्रष्ट हुन्छ कति ब्यावहारिक छ भनेर । यसमा जसले बोल्दै छ, उसले पनि ठन्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ ।
७. तर प्रधानमन्त्रीले त आफ्ना बिकाशका योजना देखेर कांग्रेस अत्तालिएको छ भन्नुहुन्छ नि त ?
हेर्नुस,बिकाशका कुरा गर्दा कांग्रेस अत्तालिने कुनै कुरा छैन । तर त्यो कति ब्यवहारिक र यथार्थपरक छ, त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । उखानटुक्का र मिठो भाषण गर्दैमा जनताको चुलो बल्दैन, यो कुरा मात्रै हामीले भन्न खोजेका हौ । जहाँसम्म अहिलेकै बिकाश योजना पुरा गर्ने तर्फ उहाँको अग्रसरता देखियो भने हामी सहयोगका लागि हरदम तयार छौ । तर यसको निश्चीत मार्गचित्र नबनुन्जेल त्यसमा बिश्वास गर्ने आधार छैन मात्रै भन्न खोजेको हो ।
८. अव यहाँकै पार्टिभित्रको कुरा गरौ, महाधिवेशन भएको २ महिना बितिसक्दा पनि अझै पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन, नेतृत्वमा पुरानै कार्यशैली हावी भयो भन्ने छ नि ?
सही हो, नेपाली कांग्रेसको बिधानमा २ महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरा बिधानमा नै ब्यवस्था भएको कुरा हो । यद्यपी पार्टि अध्यक्षको कार्यब्यस्तता र पार्टिका केही आन्तरीक काममा ब्यस्त हुनुपर्ने स्थीतीले केही ढिला अवस्य पनि भएको हो । यद्यपी अव छिट्टै यस बिषयमा टुंगो लाग्छ । यसैलाई लिएर नेतृत्वको कार्यक्षमताको कुरा अहिले नै आउँदैन ।
९. मधेशका समस्या समाधानका लागि कांग्रेसको जुन किसीमको भुमिका हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन भन्ने छ नी ?
स्वभाविक हो, संबिधान जारी हुँदै गर्दा र भइसकेको स्थीतीबाट मधेश केन्द्रित केही राजनैतिक दलहरुको आन्दोलन जारी छ । यद्यपी यसमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के छ भने बिश्वका संबिधानहरुसँग दाँज्दा हामीले बनाएको संबिधान अग्रगामी रहेको कुरामा कुनै शंका छैन । अर्को तर्फ ब्याक्तिगत रुपमा मेरा आफ्नै पनि कतिपय बिषय समेटिएका छैनन, यद्यपी धु्रबसत्य यो हो कि ९० प्रतिशत भन्दा बढि जनताका प्रतिनिधीले बनाएको संबिधान भएकाले यसमा त्यति बिरोध हुनु नपर्ने हो । जहाँसम्म मधेसको सवालसँग केन्द्रित केही मुद्धाहरु यसअघि कांग्रेसकै पहलमा संसोधन भैसकेको छ भने अन्य बिषयमा छलफलबाट टुग्याउन सक्ने कुरामा हामी सदैव सकारात्मक छौ ।
१०. अन्त्यमा, मधेस मुद्धाको छिनोफानो गर्ने अर्थमा कांग्रेसको बटमलाईन के हो ? प्रष्ट भनिदिनुस ।
हेर्नुस, आजको दिनमा मधेसको समस्या संघियतामै रहेको जस्तो देखीएको छ । मधेसमा छुट्टै प्रदेश देखी २ प्रदेश लगायत अन्य कुराहरु पनि मधेसी दलहरुबाट आवाज उठिरहेकै छन । जहाँसम्म यि बिषयहरुमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । यद्यपी यहाँ माग राख्नेहरुले पनि के बिर्सनु हुदैन भने क्षेत्रियताबादी र जातियताबादी सोच मात्रै राखेर अगाडि बढ्दा त्यसले निकास दिदैन । यस अर्थमा सुरुमा हामी सबैले नेपाली भनेर सोच्नुपर्यो जहाँ मधेस,पहाड, र हिमालको समान अस्तित्वलाई स्वीकार्ने ढंगबाट अघि बढ्दा समाधान टाढा छैन ।
केसी नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सांसद हुन ।